Ny Top 8 Things to Do in Kathmandu
Inona no tokony hatao any Kathmandu?
Sadhu lehilahy masina ao amin'ny Tempolin'i Pashupatinath. CR Shelare / Getty Images
Rehefa mitsidika an'i Nepal ianao, ny renivohitr'i Kathmandu dia toerana izay ahafahanao hiaina voalohany. Aza atao any amin'ny dingan-tsambo mihodinkodina ao amin'ny làlanao. Mendrika ny hijanona mandritra ny fotoana fohy ao amin'io toerana mahafinaritra io sy ny fanangonana ny atmosfera. Ireo zavatra goavana tokony hataon'i Kathmandou dia mirakitra ny lova, ny architecture, ny kolontsaina, ny ara-panahy ary ny fividianana.
Marvelana eo amin'ny kianja manan-tantara Durbar
Ny kianja Durbar Kathmandu. Susan Blick / Getty Images
Ny tanàna tranainy tao Kathmandu dia napetraka teo amin'ny kianja Durbar tao Basantapur, atsimon'i Thamel, izay nipetrahan'ny fianakavian'ny mpanjaka hatramin'ny taonjato faha-19. Nosoratana ho toerana manan-danja eran-tany ny UNESCO tamin'ny taona 1979. Ankoatra ny Lapan'ny Mpanjaka (Hanuman Dhoka), dia maro ny Hindu sy Boddhist tempolinia miisa amin'ny taonjato faha-12. Mampalahelo fa horohorontany goavana iray no nandringana ny ankamaroan'ny faritra atsimon'ny tempoly ary nanimba trano hafa, anisan'izany ny lapa, tamin'ny taona 2015.
Mahasorena ny mpizahatany maro tsy hiditra ao amin'ny kianjan'i Durbar ny faharetana, ny asa famerenana amin'ny laoniny, ary ny vidin'ny tapakila (1,000 rupees ho an'ny vahiny).
Na dia izany aza, dia misy faritra roa manan-danja lehibe sy manan-tantara ao Durbar ao akaikin'ny Lohanan'i Kathmandu, any Patan (500 rupees ho an'ny vahiny) ary Bhaktapur (1,500 rupees ho an'ny vahiny). Ireo tombontsoa ireo dia maneho fiheverana tsara kokoa ho an'ny vola ary mendrika ny hijery, na dia ny horohoron-tany aza dia miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny roa tonta. Betsaka ny orinasam-pitaovana manokana, toy ny an'ity Patan sy Bhaktapur Trip Day ity avy amin'ny Breakfree Adventures.
Mandehana mamakivaky ny tanàna fahiny
Tempolin'i Seto Machhendranath. John Elk III / Getty Images
Avy ao Durbar Square mankany Thamel, mandehandeha amin'ny alàlan'ny làlana mahavariana ao Kathmandu ao an-dalam-be sy eny an-dalantsara no hiambina anao mandritra ny ora maro, raha tsy andro maromaro. Ho gaga ianao hahita kanto sy sarivongana miafina any amin'ny toerana tsy azo antoka. Noho izany, mitandrema sarintany ary mandiniha!
Ao Makhan Tole, any avaratratsinanan'ny zoron'ny kianjan'i Durbar, mitarika an'i Siddhidas Marg mankany amin'ny kianjan'ny tsena Indra Chowk, izay ahitana fifandraisana dimy. Tohizo hatrany hatrany ny Siddhidas Marg mankany Kel Tole, izay ahitana ny tempolin'i Seto Machhendranath ao Kathmandu indrindra.
A manaraka ny Siddhidas Marg, dia ho azonao i Ason Tole, ny fihaonana be mponina indrindra any Kathmandu. Ny habetsaky ny olona mampihetsi-po no mampiaraka an'io lalana io hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina, ary avy any amin'ny faritra rehetra any amin'ny Lohanan'i Kathmandu dia mivarotra izany. Mendrika ny handany fotoana kely fotsiny ny fanangonana izany rehetra izany. Misy koa tempoly telo tsara tarehy natokana ho an'i Annapurna, andriamanibavin'ny harena, izay manintona ny mpivavaka.
Mivilia hiankavia eo amin'ny Chittadhar Marg ary mandeha 5 minitra eo ho eo, ary mialà eo amin'i Chandraman Singh Marg, ary tohizo hatrany mandra-pahatonganao any Thahiti Tole. Trano fonenan'ny Buddhistanina faha-15 sy ny Tempolin'i Nateshwar, natokana ho an'ny Tompo Shiva. Ny fiarovana ny tokotanim-pasika iray an-dàlana dia ny Kathesimbhu Stupa, kopian'ny tranon'ny Swayambhunath, izay misy tranon'ny 17 taona mahery ao ivelan'i Kathmandu.
Avaratr'i Thahiti Tole dia Thamel Chowk, eo afovoan'ny toeram-pisakafoanana any Kathmandu.
Mividy ary mialà ao Thamel
Rickshaw ivelan'ny fivarotana fiaramanidina tao Thamel, Kathmandu. Tom Cockrem / Getty Images
Ny distrikan'ny mpizahatany ao Thamma ao Kathmandu dia indraindray ary feno hafanam-po indraindray saingy mbola mitazona hatrany ny fahatsapana efa antitra eran-tany izy ireo, tanterak'ireo tsipiky ny sainam-pivavahana Tibetana sy ny rickshaws mikarokaroka.
Ny araben'ity faritra velona ity dia voarafitra amin'ny fivarotana izay mamakivaky akanjo miloko marevaka, firavaka, lamandy taratasy, sary hosoka, sary sokitra hazo, sarivongana mozika, mozika ary boky. Sarotra ho an'ny sarambabem-bola sarobidy (tanjona ny handoavana ny ampahatelony na ny antsasaky ny vidin'ny voatanisa voalohany), satria ny mpivarotra dia mety ho tsy misy dikany.
Mila fanampiana ve ianao? Backstreet Academy dia manolotra ity fitsidihan-tsarimihetsika malaza Kathmandu ity.
Raha vao manomboka ny andro, dia maka rivotra samihafa i Thamel satria ny làlany dia mamirapiratra amin'ny hafanana amin'ny jiro maro sy ny feon'ny mozika mivantana avy ao amin'ny barany. Mankao Cafe Cafe sy Bar ao amin'ny JP Marg, Rosemary Kitchen & Coffee Shop ao amin'ny Thamel Marg, Pèlerins 24 Restaurant sy Bar ao Thamel Marg, ary Cafe De Genre ao amin'ny JP Marg noho ny sakafo tsara sy ny fahasalamana tsara. Ny Bar's Sam, izay ambony indrindra amin'ny Hotel Mandap ao Chaksibari Marg, dia tian'ny olona taloha.
Dodge Monkeys ao Swayambhunath
Swayambhunath, tempoly malaza Bodista Nepal, mipetraka eo an-tampon'ny havoana iray any andrefan'ny tanànan'i Kathmandu. Nahatratra ny halaviran-dàlana amin'ny dingan-dava vato 365 izy io. Ny iray amin'ireo zavatra voalohany hitanao, na alohan'ny hanombohanao hianika, dia ireo gidro. An-jatony amin'izy ireo no mipetraka, ary mivezivezy manodidina ny toeram-pivoriana. Mino izy ireo fa masina, na dia tsara kokoa aza ny tsy hieritreritra ny anton'ny antony. Voalaza fa noforonina avy amin'ny lohan'i Manjushri, andriamanitra bodista izy ireo.
Soa ihany, ny ankamaroan'ny tempolin'i Swayambhunath dia namela ny horohorontany tamin'ny taona 2015. Niorina tany am-piandohan'ny taonjato faha-5 izy io ary io no antitra indrindra amin'ny karazany any Nepal.
Raha liana ny hahatakatra ny lafiny ara-pivavahana ao amin'ny tempoly sy ny maha-zava-dehibe azy eo amin'ny fiaraha-monina, dia raiso ity fitsidihana Swayambhunath tarihan'ny mônika iray mipetraka. Afaka mandray anjara amin'ny fombafomba sy ny fivoriana mihira ianao.
Ny saram-pidirana amin'ny fidirana amin'ny tempoly dia roapolo 200 ho an'ny vahiny.
Mitadiava fitahiana ao Pashupatinath
Sadhu ao amin'ny Tempolin'i Pashupatinath, Kathmandu, Nepal. Annapurna Mellor / Getty Images
Ny tempolin'i Hindu masina indrindran'i Nepal izay natokana ho an'ny Tompo Shiva, Pashupatinath dia manintona ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ny mpanonta Indiana indiana miaraka amin'ny fanangonana maloton'ny sarioham-poko hosodoko (Hindu ascetics). Ny ankamaroan'ny sadhus dia sariaka sy sambatra mba haka sary an- tsokosoko kely, ho valin'izany izay hanomezany tsodrano.
Ireo fombam-pivavahana Hindu fahiny, izay mahagaga sy tsy miova amin'ny fotoana, dia ampiharina ao amin'ny tempoly. Midira, ary ho hitanao ny fomba fijery tsy dia noraharahiana ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fiverenana indray ao amin'ny vatana hafa, anisan'izany ny fandoroana vatana mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny fandevenana eny amoron'ny renirano.
Ny saran-dalamby dia mitentina 1,000 rupees ho an'ny vahiny. Ny tempoly lehibe dia tsy voafetra amin'ny olona rehetra izay tsy Hindu kanefa afaka mandehandeha manodidina ny faritra hafa. Raha tsy te handoa vola ianao dia afaka mahita fomba tsara avy amin'ny renirano hafa.
Ny fotoana tena mahaliana indrindra dia ny maraina maromaro amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 maraina hijerena ny fivalozana, na ny hariva amin'ny 6 ora hariva mba hijery ny arti (fiderana amin'ny afo). Ny tempoly dia mikatona hatramin'ny mitataovovonana ka hatramin'ny dimy hariva isan'andro.
Manodidina ny Boudhanath
Any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Kathmandu, ao anatin'ny halavirana Pashupatinath (20 minitra eo ho eo), Boudhanath no stupa lehibe indrindra any Nepal. Foiben'ny tontolon'ny Tibetana sy ny kolontsaina izy io, ary koa ny maha-Lovan'ny Eropeana UNESCO.
Rehefa miposaka ny masoandro dia mivoaka ny vondrom-piarahamonin'ny Tibetana mba hanodidina ny stupa, miaraka amin'ny fihirana mangingina ny mantra O m Mani Padme Hum ary ny fihodinan'ny kodiarana vavaka.
Ny maraina sy ny hariva dia ny fotoana tsara indrindra hotsidihina, rehefa misy ny vavaka ary tsy misy ny fitsangatsanganana. Ny saram-pisoratana anarana ho an'ny vahiny dia 250 rupees.
Aza adino ny mandeha any amin'ny sasany amin'ireo gompas maro (monastera) manodidina an'i Boudhanath. Izy ireo dia miloko marevaka amin'ny sary mihetsika. Iray amin'ireo mahatsikaiky indrindra, Tamang Gompa, dia manoloana ny stupa ary manolotra fiheverana miavaka azy avy any ambony etany.
Tsidiho ireo tanàna any amin'ny Loham-pirenena Kathmandu
Tanàna any amin'ny Lohanan'i Kathmandu. Richard I'Anson / Getty Images
Avelao hivezivezena ny fitohanan'ny katmandou sy ny tanàn-dehibe an-tanan-dehibe, ary miverimberina ao amin'ny Lohatahin'i Kathmandu izay toerana nitazonan'ny tanàna ny fomban-drazana nentim-paharazana, tsy voafehy amin'ny fampandrosoana maoderina.
Ny roa amin'ireo tanàna malaza indrindra nitsidika dia Bungmati sy Khokana, any atsimon'i Kathmandu, tsy lavitra an'i Patan. Ireo tanàna roa ireo dia indrisy namely mafy ny horohorontany tamin'ny 2015 ary mila ny fizahan-tany mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao.
Tanànan'i Bungmati dia miorina amin'ny taonjato faha-6, ary ny andriamanitry ny orana Raino Mahhendranath dia nino fa teraka tany. Indrisy, ny tempoliny dia ravan'ny horohoron-tany ary ny patany any Patan ankehitriny dia mijanona. Maro amin'ireo mponina no mandray anjara amin'ny fanaovana sokitra hazo sy sary sokitra, ary azonao atao ny manidina amin'ny atrikasa. Khokana dia tanàna fambolena voajanahary, izay nomanina ny menônina voanio ary mandany ny ankamaroan'ny androny amin'ny fambolena ny mponina ao an-toerana.
Breakfree Adventures dia manolotra Bungmati sy Khokana Village Day Tour avy any Kathmandu.
Mitadiava kilasy na atrikasa
Mpanao sary Thangka any Nepal. Bjorn Holland / Getty Images
Tianao ve ny mihinana sakafo Nepale ary te hianatra ny fomba hanomanana azy io? Na, angamba ianao no notarihin'ireo sary hoso-doko Bodista malaza ary te hanao ny iray?
Ny SocialTours 'Cook Toy ny fialana eto an-toerana dia tena ankasitrahana ho an'ireo izay liana amin'ny traikefa momba ny sakafo fanandramana. Ny fitsidihana an-tserasera no anaran'ilay orinasa ary nalaza ho tsy maintsy atao ao Kathmandu. Hoentina any amin'ny tsenam-barotra ianao mba hakana loharanon-tsakafo vaovao sy hahafantaranao ireo zava-manitra, alohan'ny hanehoana ny fomba hanaovana ny momos , daal bhat , ary aloo paratha.
Ny Academy of Backstreet koa dia manolotra karazana fanandramana isan-karazany, izay tarihin'ny mpitsidika eo an-toerana. Ny Workshop Thaintie sary hosodoko dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary ianao dia hiafara amin'ny fahatsiarovana tsy manam-paharoa entina mody!
Tonga tany Kathmandu
Ahoana no fomba hahatongavana any Delhi any Kathmandu?
Ny fomba tsara indrindra amin'ny fitsidihana avy any India mankany Nepal
Sary Gallery: 13 Sarin'i Kathmandu mahatalanjona any Nepal
Fantaro ny Valley Tweed
Toerana fisotroana sy fihainoana mozika mivantana
Fanomezana visa ho an'i Vietnam
Inona ny hetra amin'ny varotra ao St. Paul, Minnesota?
Ny fomba hiverenana avy any Copenhagen mankany Stockholm
Fialambolin'ny lamasinina manokana any Etazonia
Maka Daffy amin'ny fankalazana ny Daffodil isan-taona
Mystic Seaport: Photo Tour
Mahogany Run Golf, St. Thomas, Nosy Virijiny Amerikana
Torolalana manan-danja ho an'ny Festival Onam 2018 any Kerala
Tsy fisakafoanana an-tsokosoko no manolotra sakafo ho an'ny sainam-bola ho an'ny mpizahantany